नेतृत्वको असक्षमताले कोहलपुरको ३० वर्ष खेर गयो – GoodnewsKhabar
नेतृत्वको असक्षमताले कोहलपुरको ३० वर्ष खेर गयो
गुडन्यूज खबर । २०७९ बैशाख २४, शनिबार २२:३०
बिगत ३० वर्ष देखी नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधीहरुले कोहलपुरको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन । वि.सं. २०४९, २०५४ र २०७४ गरी तिन पटकसम्म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै लुट बहादुर रावत कोहलपुरको प्रमुख पदमा आसिन भए । हिजोको गाविस र नगरपालिका हुदा होस या आजको स्थानिय तह नेकपा एमालेकै जनप्रतिनधीहरुले सञ्चालन गरे । तर बिगत ३० वर्षयता कोहपुरमा चर्चा गर्न लायक के बिकास भयो त ? स्थानिय तहको निर्वाचन मिती नजिकिदैं गर्दा कोहलपुरवासीले फेरी एक पटक समिक्षा र चर्चा गनुपर्ने बेला भएको छ ।
प्रशासनिक भवन ः
कोहलपुर अधिकाँश विद्यालयहरुमा अहिले पनि टिनको छानो भित्र पढाई हुने गरेको छ । ३० वर्षे शासनकालमा एमाले जनप्रतिनधीहरुले टिनको छानो समेत फेर्न नसक्नुको मुख्य कारण के होला ? शिक्षा प्रतिको बुझाई वा जवाफ देहीता र जिम्मेवारीता के हो ? जनताको प्रश्न छ । टिनका छानो, अप्रयाप्त शिक्षक दरवन्दी, स्वच्छ खाने, शौचालयको प्रवन्ध नहुँुदा गुणस्तरीय शिक्षा हुने कुरा भएन यसको दोष कसले लिने ?
सडक सञ्जाल ः
फोहर मैला र छाडा चौपाया व्यवस्थापन ः
पर्यटन र रोजगार ः
व्यवस्थीत बजार ः
अव्यवस्थीत र भुमिहीन सुकुम्वासी ः
कोहलपुर मुख्य समस्या भुमिहीन, सकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोवासी हो । तर भुमिहीन सुकुम्वासी र अब्यवस्थीत वसोवासको समस्या समाधानका लागी कोहलपुर नगरपालिकाले कुनै पहल लिएन । खास गरी कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ र अन्य क्षेत्रमा जर्जर रहेको समस्या समाधानका लागी बिगत ५ वर्ष र सो भन्दा अघी कुनै काम हुन सकेन । न्युनतम रुपमा लागत संकलन समेत हुन नसकेको गुनासो स्थानियको छ ।
चन्द्र बुढा ः कुशल शैक्षिक अभियन्ता
२०७९ बैशाख २४, शनिबार २२:३०
नेपालगन्ज । आफ्नै वडामा केही गर्नुपर्छ भन्ने स्वाभाव भएका अति मेहिनत कर्मठ व्यक्ति चन्द्र बुढा । कोहलपुर वडा नम्बर ८ पिपरीमा बस्दै आएका उनलाई विहानदेखि साँझ अबेरसम्म पनि दिर्घकालिन विकासका बारेमा निकै चिन्ताले पिरोल्छ । हरेक दिन जनताको घरदैलोमा पुग्दै आएका चन्द्र स्थानियहरुको नजरमा निकै सहज र सरल ब्यक्तित्व हुन […]
२०७९ बैशाख ९, शुक्रबार १४:४८
नेकपा एमालेले गर्‍यो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक
२०७७ फाल्गुन ३, सोमबार ०७:५९
२०७८ माघ १०, सोमबार १३:२२
२०७८ श्रावण ६, बुधबार ०७:२६